Home Wararka Al-shabaab oo Weeraray D/Afgooye
Al-shabaab oo Weeraray D/Afgooye
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose,sida ay ku so waramayaan dadka degaanka.
Al-shabaab ayaa dhowr jiho ka weerary fariismo ay ku sugnaayen ciidamada dowlada oo ku yaalo degmada Afgooye .
Dagaalka ayaa dhacay ka hor Salaadi subax, waxayn a dadka ku sugan Afgooye inoo sheegeen in dagaalayadaha Al-shabaab lagu arkayay gudaha Afgooye,sidookale waxay intaasi ku dareen daalka dhexmaray ciidamada dowlada iyo shabaabka inuu ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan.
Dagaalka ayaa la sheegaya inuu ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo soo kala gaaray ciidamada dowlada iyo Al-shabaab,sidookale wararka ayaa waxay ntaas ku darayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad rayad ah oo ku sugnaa gooobaha uu dakaalka ka dhacay.
Sikastaba ha ahaate Al-shabaab ayaa inta badan weeraro ku soo qaado degmada Afgooye,wararkii ugu danbeeyay ee inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in saakay halkaasi ay baaaritaano ka wadaan ciidamada dowlada.
Previous articleDEGDEG:Qarax Xoogan oo laga maqlay Muqdisho
Next articleLabo Wiil oo Arday ahaa oo Lagu dilay Boosaaso
Soomaaliland oo digniin u dirtay Gudoomiye Cirro (Aqriso)
Madaxweyne Farmaajo oo Axmad Madoobe Ku Dhiira Galiyay Caga Jugleynta Xildhibaanada...